किनारीकृत समुदायका कथा लेख्छन्– श्याम साह । सीमान्तीय आवाजमा उनको कलमले बल प्रदान गर्छ ! उनी धूलोको कथा बटुल्छन्, मधेसको व्यथा उजागर गर्छन् ! दमन र उत्पीडनको कहर उप्काउँछन् । कथासंग्रह ‘अब्बा’ मा साहले ‘लाटीको छोरा’ जस्तो शक्तिशाली कथामार्फत हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञानलाई उदाङ्गो पारेका थिए । साहको पछिल्लो कथासंग्रह ‘पथेर’ सिमानाका मानिसको रगत र पसिनाले सिञ्चित फरक सुवास बोकेका कथाहरूको संग्रह हो ।